Cittoo irratti Fanxoo
Ibsa Hoogganootaa fi Qondaalota ABO Caasaa Biyya Alaa.
Falmataa - September 29, 2020 0
Ibsa Hoogganootaa fi Qondaalota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Caasaa Biyya Alaa. Fulbaana 27, 2020. Nuti Hogganootni fi Qondaalotni ABO caasaa biyya alaa tattaffii mootummaa cehumsaa Oromiyaa...
Falmataa - September 28, 2020 1
For Urgent Release! The Betrayal of the Sidama Cause by the Sidama Liberation Movement (SLM) Executives By Agreeing to Merge with PP Is a Deplorable...
Walleewwan qabsoo artistoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu keessatti qooda olaanaa qabaachaa turanii fi haaraa dhufan gumaachi isaan qabasoo saba isaanii aangessuu fi Qeerroo...
RSWO: Ajjeechaa Suukanneessaa Oromticha Taarikuu Gabayyoo Ejersaa irratti raawwatame.
Ajjeechaa Suukanneessaa Oromticha Taarikuu Gabayyoo Ejersaa jedhamu irratti, Konyaa Gujii Lixaa. Fuulbana 27, 2020 Ajjeechaa suukanneessaa (morma muranii fandhisuu fi qaama gad-hafe gubuu) Oromticha Taarikuu...
Oromiyaan nagaa argachuuf Mootummaan Ce’umsaa Oromiyaa ijaaramuun dirqama
Oromiyaan nagaa argachuuf Mootummaan Ce'umsaa Oromiyaa ijaaramuun dirqama Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Fulbaana 27/2020 Qabsoon Bilisummaa Oromoo baroota hedduuf geggeeffamaa ture dhiibbaa mootummaa abbaa irree dhufee darbaafi...
September 27, 2020 In the Shadow of a Liberation War: Ethiopia, Kenya and the Oromo Quest The Oromo Liberation Front leadership views Kenya as an important...
Ethiopia election board member quits September 28, 2020 A member of Ethiopia’s National Election Board, Getahun Kassa, has announced his resignation, without giving reasons for his...
Damee Boruutin, Caamsaa 28, 2018
Waan baayyee nama dhibuu fi hiikaa hin qabne (paradox) qooda Sabni Oromoo Impaayeera Itoophiyaa kana keessatti qabu dha. Karaa tokkoon Uummatni Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Warana Bilisummaa Oromoon degaramee ABO hoggannamee Impaayeera Itoophiyyaa huduu jalaa buqqisee jigisuuf raasaa jira. Karaa biraa akka Impaayerri kun hin kufne OPDOn qofaa utubdee dhaabbu waan dadhabdee warra akka ishee yakkamoota fi Uummata Oromoo biratti tufamaa tahe ODF daboo kadhachaa jirti. Maalis tahe maal kan wal dura dhaabbachaa jiru Oromoota. Akkamiti uummata tokko keessatti warri haqa uummataaf lubbuu isaanii dabarsanii kennaniif warri uummata isaanii garaaf gurguran kun wal gituu danda’an? gaaffii jedhu deebisuun salphaa miti.
OPDOn umurii ishee guutuu Uummata Oromoo samaa fi samsisaa, hidhaa fi hisisaa, ajjeessaa fi ajjeesisaa jiraatee gaafa qabsoon Uummata Oromoo kokkee TPLF qabu lamaffaa uummata Ormoo keessa dhalatee qabsoo Uummatni Oromoo oofaa jiru harkaa butachuuf fuula duratti asi baate. Afaaniin ummata koo haa jettu malee hojiin ishee fedhii fi hawwii TPLF tiksuu akka tahe ifa jira. Diraamaa meeqa uumanii qabsoo ijibaataa gochuun waan yaroo duraaf Oromoon Masaraa Miniliki fudhate fakkeessuuf waan hin xibaarre qabani.
Kononel Abiyi Masaraa Miniliki erga seenee maal hojjechaa jira? Utuu ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaa isaa keessatti dararmaa jiranii Mootii Saawudi Arabiyaa miilatti kufee Sheek Almudeen kan qabeenya Oromoo Samaa fi Uummata Oromoo summiin fixaa ture akka hiikamu kadhata. Sheeki Almudeen qaamaTPLF keessaa bakka guddaa qaba. Kanaafuu ergaan isaa inni duraa bakka TPLF itti bobbaafte deemee hojii ishee rawwachuu qaba. Qabeenyi Impaayeera Itoophiyyaa kan Oromoo dabalatee TPLF biyya alaatti kan gurtee baafattaa turte karaa Sheeki Almudeen akka tahe beekamaa dha. Sheeki Almudeen hidhamuun rakkina TPLFiin hudhee qabe keessaa tokko.
Kana malee namoota inni gara aangootti deebisee muudaa jiru warra TPLF isheen hattuun illee hatoota jette aangoo irraa kaafte yoo agarruu Mootumaa Kononel Abiyi irraa uummatni Ipaayeera Itoophiyaa iyyuu jijjirama maal akka irraa eegatu namaa hin galu. Haadha mana Malsaa Zeenawii , Azebi Mesfiin, “Mootuu hannaa” jedhamtee kan beekamtu warshaa hannaan tokkoffaa tahe irratti muudun hiikaan isaa warra olola Obbo Lammaa fi Kononel Abiyiin gurri dude fi iji jaameef iyyuu waan galuuf natti fakkaata. Azebi Mesfiin haadha harmaa isaa waan taateef ekeraa abbaa harmaa isaa Malasaa isa guddise sodaatee kan TPLF illee hojii irraa ariite gara aango deebisuun gara fuula duraa deemee hojii uummataa fi biyyaa hojjechuu irraa gara boodaa deebi’e warra isa guddise miila dhiqaa jira.
Karaa biraa lafee namoota Itoophiyyaa biyya Libiyaa keessatti ajjeefamanii barbaacha biyya Misiraa deemuuf akka jedhu oddefamaaf jira. Sobni illee bareedaa qabdi. Waan nama Itoophiyaa jedhuuf jaallalli isa qabee waan maraataa jiru of fakkeessaa jira. Lafee nama Itoopiyaa meeqatu guyyaa guyyaan akka baalaa Impaayeera Itoophiyaa keessatti harca’aa jira. Maaliif lubbuu namaa biyya Itoophiyya keessatti tasa badaa jiru dhaabuuf hojii isaa duraa hin godhatu?
Abaan Duula Leencoo Lataa simachuun Cittoo Iirratti Fanxoo dha. Yakkamoonni yaroo akkasi wal barbaadanii wal simatan arguun uummatni bal’aan diinni isaa eenyu akka tahe hubachuuf raga gahaa dha. Abaan Duulaa dhuunfan sobee lakkobsa waliin dhahe Uummata Oromoo waraana labse. Dararamni har’a maqaa Labsi Yaroo Muddamaan uummata keenya irratti rawwatamaa hojii Abbaa Duula qofa akka tahe dagachuu hin qabnu. Dhiigni tokko tokkoo ilmaan Oromoo dhangala’aa jiruuf itti gaafatamni mataa isaa gubbaa jira. Leencoo Lataa qabsoo bilisumaa Oromoo keessatti honkora hojjechaa ture dhiifnee Waraana Bilisummaa Oromoo kuma digdamaa ol kaampii itti naqee akka TPLF itti marsitee fixxuu nama godheetu Abbaa Duulaa wajjin wal amatee harka wal fuudha. Yakkamoonni kun uummata isaanii irraa soda waan qabniif akka Impaayeerri Itoophiyaa hin kufnee utubuuf wal funanaa jiru. Baayyee bareedhaa dha. Yakkamoonni hunduu OPDO wajjin hiriira yoo galan Impaayeerri Itoophiyaa mataa isaanii irratti jigee bakka tokkotti isaan daamaca. Ammam iyyuu haa bubbulu haalli kun akka hin hafne wilii isaaniif gala.
Leencoo Lataa wajjin dhaabbachuun bu’aa isaa irra kisaaraa isaatu caala. Namn kun nama bakka tokko dhaabbatee hirmaata hojii fudhatee bakkaan gahuuf rakkina guddaa qabu dha. Kan namni guyyaa ijaaraa oole inni akka waldiigessaa halkan diigaa bula. Qofaa dhaaba ijaaree akka uummata of duba hiriirsuu hin dandeenye waan beekuuf qaama OPDO tahe malee qofaa dhaabbachuu hin danda’u. Yoo OPDOn ofitti fudhate ishee diiguun hojii isaa duraa ti. OPDOnis yaroo gabaaba keessatti of keessaa ariihuuf akka dirqamtu nama isa beekuuf ifaa dha. Dedeebi’ee kadhatu illee TPLF diigaa isaa kana bareechitee waan beektuuf achuma taa’ii nu gargaari jette hudduu qabdee gadi darbtaa turte.
Leencoo Baatii fi Hasan Huseen maaliif akka jarra kana wajjin deeman naaf hin galu. ABO keessaa akka jeneral Kamaal wajjin akka cabsatanii bahan kan godhe Leencoo Lataa fi Diimaa turan. Akka gareen jeneral Kamaal hin jabaanneef immoo Leencoo Baatii fi Hasan Huseen irraa adda baasan. Gurmuu WBO muuxxannoo bara dheera qabuu fi kan Luchoo Bukuraan hooggannamuu akka TPLF itti hidhanna guutuu wajjin harka kennatu godhan. Sana booda inni isaan maqaa bilisummaa isa jedhu sana lagatanii demookraasii qofa dhaabanna jedhanii ODF( Oromoo Democrati Front ) kan isaan dhaabatan. Akka yaada isaanii utuu tahe ABO diigamee raawwateef jira. Leencoo fi Diimaan Ilmaan Oromoo ficisiisanii akka diplomaatiitti karaa Bolee yaroo TPLF iin gageefaman goottonni Oromoo warra akka Nadhii Gammadaa fi Guutamaa Hawoos gara Baalee senanii qabsoo bilisummaa uummata isaanii wajjin finiinsuu filatan. Ayyaan ilaallattootaaf waan xiqqoo nyaachuuf dhaqanii nyaatamuunis akka jiru itti hin mul’atu. Amma qotiyyoo baala malee halayyaa hin agarreeti.
Karaa biraa qabsoon Uummata Oromoo of calalaa jira. Warri yakkamootaa fi kosii akka Leencoo fi Diimaa amanee wajjin hiriira gallee aasraa baayyee baasee jirra. Diina fuula duraan namatti dhufu caalaa diina ijaarsa keessatu nama huba. Qabsoo Uummata Oromoo ABOn hooggannamu keessatti jiraachuun Leencoo xanacha ( cancer) tahee ABO cicciree guddina dowwee kan quucarse tahuu erga inni keessaa arhama ABO guddatee dagaaguun ragaa ijaan aggarru dha.
OPDO irratti ODF wal tahuun kan nama dinqu hin qabu. Maqaaf malee lamaan isaanii walitti dhufanii qabsoo uummatni Oromoo ofaa jiru irratti garagarummaa tokko illee fiduu hin danda’an. Akka afaaniin oduu jalqabaniin utuu hojiin jijjirama waan fakkaatu argarsiisanii jiraatanii nama amma tokko gowwomsu ni danda’u taha. Diraamaan TPLF fi OPDO warri hin galleef tokko tokko yaroo haa keninuuf yaada jedhu kaasu. Bareedhaa dha. Yaroo isaanii fudhatanii haa ilaalan. Warri akkasii qabsoo uummata hin gargaaranis hin miidhanis. Mootummaa sanaafis dhima hin baasan. Warra jiddu taa’ee gara jaabaatu eegatu dha. Qabsoo keessatti gurmuun kun baayyee dha. Garaagarummaa kan fidu warra murannoo guutuun qabsa’u waan taheef Fincila Xumura Garbummaa bakkaan gahuuf hidhaannaa keenya jabeefannee qabsoo keenya itti haa fufnu!
Ijifannoo Ummata Oromoof!
Previous articleBURKA BREAKS CANADIAN ALL-COMERS RECORD AT OTTAWA MARATHON
Next articleOromo TV: Impaayera Toophiyaa fi Dr. Abiyyi – Marii Dr. Gulummaa Gammadaa Waliin taasifne
Afaan Oromoo Falmataa - September 28, 2020 0
Afaan Oromoo Admin - September 27, 2020 0
Bonsisa Geda November 30, 2019 At 5:04 pm
sirriidha yaada dhugaa hin haalamnedha
In the Shadow of a Liberation War: Ethiopia, Kenya and the...